Fahasamihafana eo amin'ny ambim-bola sy tombom-barotra Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny ambim-bola sy tombom-barotra Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Business / Finance / Accounting / Fahasamihafana eo amin'ny ambim-bava sy ny tombom-barotra
Fahasamihafana eo amin'ny ambim-bola sy ny tombom-barotra
10 Novambra 2012 Narotsak'i Admin
Izay fikambanana mahazo karama na mandany vola dia manantena ny hiverina amin'ny asany mihoatra ny fandaniana lany. Ny fiverenana toy izany, indraindray fantatra amin'ny hoe tombony na ambim-bola, dia tena ilaina amin'ny orinasa na fikambanana maniry ny hampandeha tsara ny asany. Na izany aza, ny karama mihoampampana azo avy amin'ny fikambanana dia samy hafa no iantsoana azy arakaraka ny karazana fandaminana, ny karazana hetsika atao ary ny tanjon'ny fiasan'ny fikambanana. Ny lahatsoratra manaraka dia manolotra fanazavana momba ny fitoviana eo amin'ny teny hoe tombony sy ambim-bava ary manoritsoritra ny fahasamihafana misy eo amin'izy samy izy mifototra amin'ny karazana fandaminana voalaza.
Tombony azo rehefa misy orinasa afaka mahazo fidiram-bola ampy hihoatra ny fandaniana. Ny teny hoe "tombom-barotra" dia ampiasaina mifanohitra amin'ny ambim-bava satria ny orinasa raha ny tokony ho izy dia miasa amin'ny fitadiavana tombony tokana. Ny tombom-barotra azon'ny orinasa iray dia mikajiana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fandaniana rehetra (faktiora ilaina, hofan-trano, karama, vidim-bokatra, vidin'ny fitaovana vaovao, hetra, sns.) Avy amin'ny vola miditra vokarin'ny orinasa iray. Ny tombom-barotra dia zava-dehibe amin'ny orinasa iray satria io ny fiverenan'ny tompona orinasa mba hizaka ny vidiny sy ny loza mety hitranga amin'ny fampandehanana ny orinasa. Ilaina ihany koa ny tombom-barotra satria manome hevitra vitsivitsy momba ny fahombiazan'ny orinasa, ary afaka manampy amin'ny fisintomana famatsiam-bola avy any ivelany. Ny tombom-barotra dia azo apetraka indray amin'ny asa fandraharahana, hampitomboana bebe kokoa ny orinasa izay hantsoina hoe tombony voatana.
Amin'ny ankapobeny, ny ambim-bava dia manondro zavatra sisa na mihoatra, raha vao nahavita ny takiny. Amin'ny lafiny ara-bola, ny ambim-bava dia manondro ny fidiram-bola be loatra azon'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay tsy mitady mitady tombony, ary mety manana tanjona hafa toy ny miasa ho an'ny tombontsoam-bahoaka bebe kokoa. Ny ambim-bava dia tsy mitovy amin'ny tombom-barotra ary mitovy amin'ny fomba mitovy amin'izany amin'ny fampitomboana ny fandaniana rehetra nidina nandritra ny taona ary hampihena izany amin'ny vola miditra rehetra. Ny governemanta amin'ny firenena iray dia mety hanao ambim-bava ihany koa, izay mazàna holazaina ho ambim-bola fa mihoatra ny vola lany ny vola miditra amin'ny governemanta. Tahaka ny ao amin'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra, ny governemanta koa dia namerina nanangona ny ambim-bolan'izy ireo hiverina amin'ny fampandrosoana ny firenena sy manamafy ny toekarena.
Tombom-barotra vs Surplus
Ny vola mihoampampana sy ny tombom-barotra dia mitovy amin'ny tsirairay satria izy roa dia maneho ny vola azo mihoatra ny fandaniana. Ilaina ny tombom-barotra sy ny ambim-bava satria famantarana tsara ny tanjaka ara-bola sy ny fahombiazan'ny fandaminana ireo. Tahaka ny tombom-barotra, ny ambim-bola koa dia azo averina averina miverina amin'ny orinasa miaraka amin'ny tanjona hahazoana ny haavon'ny fitomboana sy ny vola miditra. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'izy roa dia ny tombom-barotra matetika no teny ampiasaina amin'ny fidiram-bola be loatra ataon'ny orinasa mitady tombom-barotra, fa ny ambim-bava kosa dia ilay nomena ny karama mihoampampana nataon'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
• Izay fikambanana mahazo karama na mandany vola dia manantena ny hiverina amin'ny asany mihoatra ny fandaniana lany. Ny fiverenana toy izany, indraindray fantatra amin'ny hoe tombony na ambim-bola, dia tena ilaina amin'ny orinasa na fikambanana maniry ny hampandeha tsara ny asany.
• Ny surplus sy ny tombom-barotra dia mitovy amin'ny iray amin'izy samy izy satria izy roa dia maneho ny vola azo mihoatra ny fandaniana.
• Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'izy roa dia ny tombom-barotra matetika no teny ampiasaina amin'ny fidiram-bola be loatra ataon'ny orinasa mitady tombom-barotra, fa ny ambim-bava kosa no fe-potoana omena ny fidiram-bola be loatra nataon'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra.
Fahasamihafana eo amin'ny vola miditra sy ny karama Fahasamihafana eo amin'ny sisin-tany sy ny tombom-barotra Fahasamihafana eo amin'ny tombom-barotra aman-karena Fahasamihafana eo amin'ny tombom-barotra sy ny vola miditra Fahasamihafana eo amin'ny tombony amin'ny kaonty sy ny tombom-barotra
Filed Under: Accounting Tagged With: tombony , ambim-bola
Fahasamihafana eo amin'ny fifandraisana amin'ny asa sy ny tena manokana
Fahasamihafana eo amin'ny homospory sy ny heterospory
Fahasamihafana eo amin'ny methane sy ny carbon dioksida
Fahasamihafana eo amin'ny fanapahana sy ny filtrana
Fahasamihafana eo amin'ny Polymer sy Macromolecule